I-Boat House - ukuthula okuphelele okungasemanzini
Auckland, i-New Zealand
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Francis
I-waterfront ephelele enokubukwa okuseduze-njengoba-ungathola-ukuthola ulwandle nezilwane zasendle ezisogwini - ezinikeza ubumfihlo, ukuzola, ukuphuma kwelanga okuhle nokushona kwelanga okumangalisayo... Kuseduze kakhulu nezinsiza eziningi - okuhlanganisa amabala egalofu, amabhishi, ukuthenga, kanye ne-Auckland's CBD
Sicela uqaphele uma ukubhukha kwakho kuthintwa isexwayiso se-COVID esikuvimbela ukuba uhambe unelungelo lokubuyiselwa imali kuphela ngokuvumelana nenqubomgomo yokukhansela noma sizokunikeza isikweletu esisebenza izinyanga ezingu-6 kwezinye izinsuku.
I-Boat House ekuqaleni yayisetshenziswa njengeshede lezikebhe elalinwebeka cishe ngamamitha amathathu phezu kwamanzi lapho amagagasi amakhulu. Ngesinye isikhathi (ngokudabukisayo) indawo enamanzi angaphezulu yasuswa njengoba yayisesimweni esibi sokulungiseka futhi ishede lezikebhe laphinde lasetshenziswa njengendlu yezivakashi ngeminyaka yo-1970 noma yo-1980. Phakathi kuka-1990 futhi manje isibe isitudiyo sokuqopha futhi yanwetshwa endaweni yedamu lokubhukuda. Isandiso manje sesisetshenziswa njengehhovisi futhi isitudiyo silungiswe abanikazi baso bamanje ukuze izivakashi zijabulele ubuhle nokuzola kwendawo yaso ngokunethezeka okukhulu.
Itholakala ekugcineni kwendawo yethu futhi ngasonqenqemeni lwamanzi, i-Boat House ihlukaniswe nendlu enkulu ngedamu lokubhukuda owamukelekile ukuthi ulijabulele - mhlawumbe ezinyangeni ezifudumele.
Kukhona indawo yokupaka yamahhala yemoto eyodwa.
I-Bayswater itholakala ngqo ngaphesheya kwetheku ukusuka e-Auckland CBD futhi inesevisi yesikebhe ehamba usuku lonke ukuya nokubuya edolobheni, kuhlanganise nezimpelasonto.
I-Bayswater iphakathi kwe-Devonport ne-Takapuna, ihlinzeka ngokusondelana nakho konke okunikezwa yi-Auckland's North Shore mayelana nokuzijabulisa namabhishi.
Living every day like it’s my last
Sihlala endlini enkulu kule ndawo futhi siyatholakala ukusiza nganoma yimiphi imibuzo nganoma yisiphi isikhathi ngenhlonipho ephelele ngobumfihlo bakho.
UFrancis Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Auckland namaphethelo